Isamsung yazisa ngokusesikweni iGlass Qaphela 9 eNew York [ngqo] | Iindaba zeGajethi
Kwiiveki ezininzi emva kokuba amarhe kunye nokuvuza kuqale malunga nemodeli entsha ye-Samsung ka-Agasti, i-Galaxy Note 9, namhlanje ibiyiyo thaca ngokusemthethweni kwisiXeko saseNew York Njengoko ucinga, iinkcukacha kunye nedatha ye-phablet yaseMzantsi Korea iqinisekiswe ngokusemthethweni.
Ngezi ntsuku siye sabona ukuvuza okuninzi kunye namarhe okugqibela esixhobo esingatshintshi kakhulu xa kuthelekiswa nemodeli yangaphambili ngokwendlela yoyilo, kodwa njengoko ihlala iba yeyona inamandla kwi-Samsung, Ngoku sinokuthi le Samsung Galaxy Note 9 isemthethweni.
Ukuba uyafuna landela le ntetho ngqo ungayenza ukusuka apha:
Kubonakala ngathi i-Samsung ibeka yonke inyama kwi-grill kunye neNqaku elitsha ngokwamandla, kodwa i-Galaxy Note ingaphezulu koko kwaye nabasebenzisi abayiNqaku baya kubona ngamehlo amahle kakhulu onke amanqaku amatsha aphunyezwe kule phablet. Okwangoku umboniso uyaqhubeka nezifundo zawo kwaye babonisa izibonelelo zale Nqaku linamandla ukongeza thaca i-Galaxy Watch, Into esiyibonileyo nakwimarhe ngaphambi kwengxelo esemthethweni. Enye yezona zinto zimangalisayo kuye kwaba xa "utata" waseFortnite ethathe inqanaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Isamsung yazisa ngokusemthethweni iGlass Note 9 eNew York [Ngqo]